प्याजको नियमित सेवन यौन क्षमता बढाउने अचुक उपाय - गोकर्णेश्वर खबर
प्याजको नियमित सेवन यौन क्षमता बढाउने अचुक उपाय
गोकर्णेश्वर खबर४ फाल्गुन २०७७, मंगलवार २१:२३ मा प्रकाशित (१ हफ्ता अघि) ५७ पाठक संख्या
काठमाडौं – प्याजको सेवन गर्न तपाई कति रुचाउनु हुन्छ रु वा सेवनमा धेरै भएको त छैन् ? वा त्यसको बास्ना मन पर्दैन ? वा सेवन गर्न उचित मान्नु हुन्न ? तर प्याजका धेरै उपयुक्तता मध्य एक हो यौन क्षेत्रमा बृद्धि ।
प्याजका फाइदा ः सेता प्याजको रस, अदुवाको रस, शुद्ध मह र घिउ ५–५ ग्राम मिलाएर हरेक बिहान सेवन गर्नुहोस् । एक महिनासम्मको नियमित सेवनले तपाइँमा यौन क्षमता वृद्धि भएको पाउनुहुनेछ ।
यसले शिघ्रपतनको समस्या कम गर्नेछ । साथै प्याजको रस र मह मिलाएर नियमित सेवन गर्दा पनि शिघ्रपतनको समस्या कम हुन्छ । मासको दालको पिठो बनाएर त्यसमा प्याजको रसले मोल्नुहोस् र त्यसलाई दूधमा पकाएर नियमित सेवन गर्नुहोस् । यसले तपाइँको यौन क्षमतामा वृद्धि गर्ने एक अध्ययन ले देखाएको छ ।
महिलाको भन्दा पुरुषमा यौन शक्ती कमजोर हुने र छिटै सिथिल हुने भएकाले पनि पुरुषले विभिन्न औषधीहरु प्रयोग गरेको पाइएको छ । तर त्यो भन्दा प्याजको सेवन धेरै राम्रो हुन विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । प्याजको नियमित सेवनकै कारण यौन क्षमता बढेको विज्ञहरुको भनाई छ ।